के फ्लू शटले कोरोनाभाइरस विरूद्ध मद्दत गर्दछ? Tamiflu छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण घरपालुवा जनावर चेकआउट औषधि बनाम मित्र कम्पनी समुदाय, कल्याण प्रेस कम्पनी, औषधि जानकारी भारी खेल औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के फ्लू शट वा Tamiflu COVID-19 लाई रोक्छ?
के फ्लू शट वा Tamiflu COVID-19 लाई रोक्छ?
शरद approतु नजिक आईपुग्दा, धेरै व्यक्तिहरू आफैंलाई मौसमी इन्फ्लूएन्जाबाट बचाउन फ्लूको शट लिन बिन्दु बनाउँछन्। धेरै व्यक्तिहरू पहिले नै तिनीहरूको प्राप्त गरिसकेका छन्।
यस वर्ष, यो विशेष गरी राम्रो विचार हो, एमभिन, केभिन म्याकग्रा, एमडी भन्छन्, अमेरिकन कलेज अफ एलर्जी, दमा, र इम्युनोलजीको क्लिनिकल प्रवक्ता र कनेक्टिकटका निजी अभ्यासमा एलर्जी विज्ञ। २०२० फ्लूको मौसम (जुन उत्तर अमेरिकामा सामान्यतया अक्टुबरमा सुरु हुन्छ) चलिरहेको कोरोनाभाइरस महामारीको बीचमा र्‍याम्प हुनेछ। यसको मतलब दुई भाइरसहरू छन् जुन तपाईंलाई धेरै बिरामी पार्ने क्षमता छ एकै समयमा सर्कुलेट हुनेछ। केही वैज्ञानिकहरू यसलाई डब गर्दैछन् twindemic ।
तपाईसँग इन्फ्लूएन्जाको हल्का मामला हुन सक्छ। तपाईं COVID-19 को एक हल्का मामला प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वा, तपाईं दुबैलाई एकै समयमा समात्नुहुनेछ, जसले थप गम्भीर लक्षणहरू निम्त्याउँदछ। हाल कुनै छैन SARS-CoV-2 विरुद्ध खोप , भाइरस जसले COVID-19 कारण गर्दछ। तर तिमी सक्छ फ्लूबाट आफूलाई जोगाउनुहोस् र फ्लू खोप पाएर तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्नेबाट जोगिनुहोस्।
तपाईंलाई फ्लू शट किन चाहिन्छ?
एक मौसमी फ्लू खोपले तपाईंलाई फ्लू लाग्नबाट जोगिन वा रोगको गम्भीरतालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ यदि तपाईंले फ्लू लिनुभयो भने। दुई प्रकारका खोपहरू हुन्छन्: शट र नाक धुवाँ।
मौसमी फ्लू खोप १००% प्रभावकारी हुँदैन, तर विशेषज्ञहरूले सुझाव दिन्छ कि everyone महिना र माथिका सबैले खोप लिनु पर्छ, विशेष गरी यदि तिनीहरू फ्लूबाट जटिलताको उच्च जोखिममा छन् भने। उदाहरणका लागि, डा। म्याकग्रा भन्छन्, एलर्जी र दम भएका मानिसहरूलाई फ्लूबाट नराम्रो नतिजाको बढी जोखिम हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले पक्कै पनि फ्लूको शट लिनु पर्छ।
लगभग सबै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ फ्लू शट , केहि दुर्लभ अपवादहरूको साथ, जस्तै खोपमा एलर्जीको साथ व्यक्ति वा यसको कुनै पनि घटकहरू। यद्यपि त्यहाँ छन् अतिरिक्त अपवादहरू जब यो नाक स्प्रे भ्याक्सिनको लागि आउँदछ , गर्भवती महिला, प्रतिरक्षा पीडित मानिस, 50० भन्दा माथिका मानिस र २ बर्ष मुनिका बच्चाहरू सहित।
के फ्लू शटले कोरोनाभाइरस विरूद्ध मद्दत गर्दछ?
फ्लू खोप इन्फ्लूएन्जा बिरूद्ध सावधानी अपनाउनु मात्र हो। यो नयाँ कोरोनाभाइरसबाट तपाईको रक्षा गर्दैन। किनभने यो कोरोनाभाइरस एक उपन्यास भाइरस हो - जुन एउटा नयाँ भाइरस हो - तपाईंको शरीरसँग यसको बिरूद्ध अवरूद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता हुँदैन। तपाईं यसमा कमजोर हुनुहुन्छ। यो कोरोनाभाइरसका लागि अझै एउटा खोप उपलब्ध छैन, यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरूले क्लिनिकल परीक्षणमा धेरै सम्भावित खोपहरूको परीक्षण गरिरहेका छन् ।
तर फ्लूको शटले तपाईंको COVID-१ against बिरूद्ध बचाउनेछैन, तर यसले COVID-१ and र फ्लू दुबै हुने सम्भाव्य प्रकोपको सम्भावनालाई कम गर्न सक्छ, पारिवारिक चिकित्सामा विशेषज्ञता प्राप्त प्राथमिक उपचार चिकित्सक सुसन बेसेर भन्छिन्। बाल्टीमोरमा ओभरल्यामा दया निजी चिकित्सकहरू।
दुबै भाइरसहरू पाउँदा धेरै गम्भीर लक्षणहरू हुन सक्छ र अझ खराब रोगको सम्भावना बढ्न सक्छ, डा। बेसर बताउँदछन्।
यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ किनकि विज्ञहरू विश्वास गर्छन् COVID-19 मौसमी फ्लू भन्दा धेरै घातक छ । यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, COVID-19 को वास्तविक मृत्यु दर निर्धारण गर्न केहि समय लिने छ ।
फ्रिजमा राख्नु पर्ने औषधि संग यात्रा
कोरोनाभाइरसको लागि टेमिफ्लुको बारेमा कसरी?
धेरै डाक्टरहरूले सुझाव दिन्छ कि तपाईले एन्टीवायरल औषधि जस्तो प्रिस्क्रिप्शन लिनुभयो तामीफ्लु (oseltamivir) फ्लूबाट अधिक छिटो पुनः प्राप्त गर्न। जब फ्लू लक्षणहरूको शुरुआतको hours 48 घण्टा भित्र लिन्छ, तामीफ्लु एक दिन वा बढि तपाइँको रोगलाई कम गर्न प्रभावकारी हुन सक्छ। अर्को antiviral विकल्प छ Xofluza ( baloxavir marboxil )। यो हो संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा hours 48 घण्टा भित्र प्रयोगको लागि अनुमोदित फ्लू लक्षण को शुरुआत को, र फ्लू रोक्न को लागी भाइरसको जोखिम पछि ।
आइमीन हेल्थका योगदानकर्ता एमडी लेन पोष्टन भन्छिन्, तामीफ्लुले इन्जाइम न्यूरामिनिडेजलाई रोक्छ जसले इन्फ्लूएन्जा भाइरसको आफ्नै प्रति बनाउने क्षमतालाई रोक्दछ। यो दुवै इन्फ्लूएन्जा ए र इन्फ्लूएन्जा बी को उपचार को लागी एफडीए अनुमोदित छ।
अहिले, विशेषज्ञहरूलाई थाहा छैन कि यदि Tamiflu ले COVID-19 संक्रमणको बिरूद्ध पनि काम गर्दछ। डा। पोष्टन भन्छिन्, कि हाल Tamiflu को COVID मा कुनै प्रभाव छ कि छैन भनेर हेर्न क्लिनिकल परीक्षणहरू छन्। तामिफ्लूले केवल COVID मा काम गर्दछ यदि यससँग कुनै समान न्यूरामिनिडेज एन्जाइम गतिविधि छ वा अज्ञात मार्ग छ जहाँ यसले कार्य गर्दछ।
जबकि कुनै निश्चित उत्तर अहिले सम्म छैन, तपाईं सायद यसमा भरोसा गर्न चाहनुहुन्न। डा। पोष्टनले नोट गरे कि यो आशालाग्दो जस्तो देखिदैन, चीनमा क्लिनिकल परीक्षणहरूको नतीजाको आधारमा।
तपाईंले फ्लू जस्तो लक्षणहरू विकास गर्नुभयो भने तपाईंले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईं ज्वरो र अन्य फ्लू जस्तो लक्षणको विकास गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। तपाईंको डाक्टरलाई अहिले नै कल गर्नुहोस् र निर्देशनका लागि सोध्नुहोस्। तपाईंलाई भर्खर फ्लू हुन सक्छ, तर तपाईं COVID-19 बाट संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ।
यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ किनकि बिरामीहरूलाई फ्लूबाट COVID संक्रमण बताउन गाह्रो हुन्छ, डा। म्याकग्रा भन्छन्। र तपाई दुबै संक्रमण पाउन सक्नुहुन्छ [एकै समयमा] दुर्भाग्यवश।
तपाईको फ्लू फ्लू छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न तपाईको डाक्टरले फ्लू टेस्ट चलाउन सक्छ। यदि यो सकारात्मक फिर्ता आउँछ, र तपाईं-48 घण्टा विन्डो भित्र हुनुहुन्छ भने, तपाईं Tamiflu लिन सुरु गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
जे होस्, यदि तपाईंको फ्लू परीक्षण नकारात्मक फिर्ता आयो भने, तपाइँको डाक्टर एक COVID-19 परीक्षण सिफारिश गर्न सक्छ। यदि तपाइँको COVID परीक्षण सकारात्मक बाहिर जान्छ भने, तपाइँको डाक्टर तपाइँ संक्रामक भएको बेला र आफैलाई कसरी सम्हाल्ने भनेर स्वस्थ हुनको लागि तपाइँ आफैलाई क्वारिनेनिंगको लागि निर्देशनहरू लिन सक्नुहुन्छ। केही व्यक्ति एन्टीवायरल औषधि रिमेडेभिर लिन योग्य हुन सक्छन्, जुन अझै पनी एक मानिन्छ संयुक्त राज्यमा अनुसन्धान औषधि तर COVID-19 को उपचारको लागि स्वीकृतिका लागि हालै FDA लाई पेश गरिएको थियो ।
फ्लू शट बाहिर
फ्लू शट बिमारी रोक्नको लागि तपाइँको मात्र उपकरण होईन।
डा। बेसेर भन्छन् कि ह्यान्डवसि,, मास्क र सामाजिक दूरीले फ्लूको प्रसारण रोक्न मद्दत गर्दछ। दुबै श्वासप्रश्वासको भाइरसहरू छन् र एयरबोर्न ड्रपलेटहरू मार्फत फैलिए।
बिरामी व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनु र अन्य व्यक्तिहरूको भीडले सार्वजनिक स्थानहरूलाई वेवास्ता गर्दा पनि तपाईंलाई फ्लू वा COVID-19 बाट बिरामी हुने जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
गर्भवती हुँदा खमीर संक्रमण खुजली को लागी घरेलु उपचार
हेपरिन को सामान्य नाम के हो
यू एस को लगभग कति प्रतिशत वयस्कहरु मोटो छन्?